Obama oo Trump u sheegay in uu Joojiyo cabashada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldObama oo Trump u sheegay in uu Joojiyo cabashada
October 18, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. [Sawirka: AP]
Washington(Puntland Mirror) Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay Donald Trump “in uu joojiyo cabashada” isaga oo nasakhay cabashada Trump ee doorashada Aqalka Cad in ay tahay mid la qorsheeyay.
Waxa uu sheegay in Mr Trump uu iskudayayo in uu ceebeeyo kahor inta aysan dhicin doorashada.
“Waxaan kula talin Mr Trump in uu joojiyo cabashada uuna isku dayo in uu sameeyo sidii uu cod ku heli lahaa,” ayuu yiri Obama.
“Waxay la macno tahay…. in aysan kaa muuqan qaab hoggaamineed iyo adayg oo aad ku doonaysid madaxweyne, haddii aad bilowdid cabasho kahor inta aysan ciyaarta dhamaan,” ayuu ku daray Madaxweyne Obama.
Mr Trump ayaa wajahaya hoos u dhac tirada doorashada ah iyo eedaymo xoog galmo ah.
Ganacsadaha siyaasiga isu-bedelay ayaa ku andacooday doorashada 8-da November in ay noqon karto mid horey loogu qorsheeyay murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Hillary Clinton.